Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya: Dr. Saadiq Eenow
Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya: Dr. Saadiq Eenow - Qaybta: 3aad
SomaliTalk.com | August 5, 2010
"Markii si xeeldheer loogu kuurgalay akhbaaraha taariikhdaan kusoo arooray waxaa suurta gashay in lagu jaangooyo maalinkaas waxyigu soo dagay inuu yahay maalintii Isniinta ee bisha Ramadaan ahayd 21 waqti habayn ah, waxayna waafaqsan tahay tobanka bisha August sanadka 610 ciise dabadi (10/8/610-kii ciise dabadi), cimrigii Nebiguna NNKH wuxuu maalintaas ku xaddadan yahay 40-sano oo dayax ah, lix bilood iyo 12-maalmood, taasoo u dhiganta 39-sano oo qorrax ah, sadex bilood iyo 12-maalmood." Tixraac qormadii Sheikh Sancaani ee Silsiladda Taariikhda Islaamka.
Ayadahii u horeeyey Quraanka oo ku bilaabatay AKHRI, waxay tilmaamaysa mucjisada Qur'aanka, maadaama horumar kasta oo dunida waxa lagu gaaraa ay tahay wax akhrinta.
Aayaddu waxay xoojisey "Wax ku akhri magaca Allah" taas oo daliil u ah haddii aad Allah ka tagtid aqoontaasi waxay noqonaysaa Aqoontii uu Nebigu NNKH yiri: Allahayow waxaan kaa magan geliyaa cilmi aan wax nafac ah lahayn.
Xadaaradii Islaamku meelihii ay ugu xoog weyneyd.
Xilligii Khaliifadii al-Ma'mun (oo ahaa wiilkii Harun al-Rashid) waxa uu dalbaday in loo keeno wixii kutub/buugaag iyo qoraal adduunka yiil. Markii loo keenay waxa uu yiri kulligood hala tarjumo isagoo adeegsanayey Gurigii Xigmadda. Ilbaxnimada, aragtida iyo hanka intaas gaaray ayaa Islaamkii la yimid. Xilligaas waxa uu ahaa xilligii Dahabiga ahaa ee Islaamka, waa bartamihii qarnigii 8-aad ilaa Qarnigii 13aad AD (Islamic Renaissance /Islamic Golden Age).
Gurigii Xigmadda (House of Wisdom / بيت الحكمة‎) waxaa asalkii asaasay Harun al-Rashid oo ahaa khaliifkii Cabaasiyiinta, gurigaas oo noqday machad meeshii ugu saraysa gaarey intii u dhaxaysay 813�833 oo ahayd xilligii uu khilaafadda hayey wiilkiisii al-Ma'mun. Guriga xigmadda oo xaruntiisu ahayd magaalada Baqdaad, waxana xaruntaasi hirgelisey in luqadda Carabiga lagu tarjumo dhammaan cilmigii markaas jirey oo dhan oo laga soo qaadanayey buugaagtii iyo culuumtii kale ee jirtey. Baqdaad waxay noqotay magaalada ugu camiran adduunka xag kasta.
Xilligii Khaliifatul al-Ma'mun waxaa Guriga Xigmaddu noqday meesha Adduunka looga soo raadsado cilmiga, sida Xisaabta, cilmiga xiddigiska, daawada, juquraafiga, kimisteriga iwm. Aqoonyahanadii ka tirsanaa Guriga Xigmadda waxaa ka mid ahaa Aabahii xisaabta Algebra oo ahaa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, oo sannadkii 820 AD qoray buugga Kitab Al-Jabra, buuggaas oo ah kan laga qaatay xisaabta Aljabrada ee adduunka hadda laga adeegsado.
Islaamkii markii uu hana qaaday waxaa dhacday in Carabtii ilbaxa ahayd ay aad u daneeyaan Soomaaliya. Waxaana markaas Soomaaliya yimid dal-mareeno badan oo Carbeed ama Muslimiin ah, kuwaas oo qoraallo ka sameeyey Soomaaliya. Dal-mareenadaas iyo taariikhihii ay yimaadeen Soomaaliya waxaa ka mid ahaa: Al-Yaqubi (Qarnigii 9aad ciise dabadii). Al-Mas'udi (933), Al-Istakhri (960), Ibnu Hawgal (977), Al-Barruni (1030), Al-i-drissi (1154), Yaqut (1229), Ibna Battuta (1331), Al-Harruni (1334), Ibn-Said (1344).
Ibnu Batuuta (oo ahaa nin Muslim ah oo ah reer Moroccan dadka loo yaqaan Berberiga, oo ahaa bad-mareen iyo sahamiye adduunka ku safri jirey) markii uu yimid Muqdisho sannadkii 1331 waxa uu ka qoray hadalkan: "Muqdisho waa magaalo baaxad ahaan aad u weyn oo aan la soo koobi karin. Dadkeedu waxay leeyihiin Geel farabadan oo ay maalinkasta qashaan boqollaal, waxa kale oo ay leeyihiin ido farabadan. Dadkeedu waa dad aad ugu wanaagsan ganacsiga. Waa magaalo lagu farsameeyo dharka loogu magac daray magaalada, kuwaas oo aysan jirin cid kula tartamaysa, waxaana loo dhoofiyaa ilaa Masar iyo meelo kale."
Zheng He maraakiibtii uu safarka ku geli jirey waxaa taariikhdu xustaa in ay aad u baaxad weynayeen. Si aad u aragtid baaxadda maraakiibtii Zheng He waxaad booqan kartaa Mall-ka "Ibnu Battuta Mall" oo ku yaal Dubai, halkaas oo lagu soo dhig markab kamida maraakiibtii Zheng He oo la barbar dhigayo markabkii Christopher Columbus kaga gudbey badweynta Atlantic sannadkii 1492 safarkiisii uu ku tegey qaarada Ameerika, taas oo muujinaysa in markabka Zheng He uu aad uga baaxad weyn yahay.
Zheng He waalidkiis oo Muslimiin ahaa waxay u bixiyeen magaca "Ma Ho" oo Afka Shiinaha ku ah Muxammad. Aabihiis iyo awgiisba waxay ahaayeen Muslimiin, waxayna tageen Xajka. Arrintaas oo wiilkii yaraa ee Zheng He ku dhalisay in uu maalin uun sidaas oo kale uu safar dheer u galo. Intii uu nolaa Zheng He waxa uu tegey Xajka (Makka) iyo Madiina. Waxaa jira meelo badan oo loogu magac daray magaciisii loo aqoon jirey xilligii uu carruurta ahaa oo ah Sanbao (oo macnaheedu yahay saddexddexdii qaniimadood), waxaana goobahaas loogu magac daray ku yaaliin Thailand, Malaysia iyo Indonsia.
Socdaalladaas Carabta iyo Muslimiinta kale waxaa garab socdey taariikh looyaqaan "Wadadii Xariirta" (Silk Road) oo ah waddo ganacsi oo isku xiri jirtey Yurubta Koonfureed ilaa Shiinaha. Magaca wadadaas oo asal ahaan ka soo jeeda ganancsi aad u kobcay oo ahaa Shiinaha oo ka ganacsan jirey Xariirta wadadii ay marin jireen. Wadadaas waxyaabihii lagu safrin jirey waxaa kamid ahaa waxyaabaha cuntada lagu macaaniyo ama lagu udgiyo oo ay reer Yurub danaynayeen, waxaana alaabtaas laga keeni jirey bariga fog ilaa Shiinaha.
Qormadii hore waxaan kusoo aragnay in Soomaaliya loo aqoon jirey "Dhulkii Qorfaha" oo ay u aqoonjireey Giriiggii hore & Roomankii oo Soomaaliya ka qaadan jirey qorfaha. Arrimahaas oo dhan waxay caddayn u yihiin taariikhda facaweyn ah ee dhulka iyo dadka Soomaaliyeed oo weligood xiriir la lahaa xadaaradihii iyo ganacsiyadii adduunka soo maray ilaa haddana ay Soomaalidu yihiin dad ganacsiga aad ugu wanaagsan oo firfircoon. (Taariikhdaada marka aad taqaanid ayaad hore u socon kastaa....)
La soco Qaybta 3aad.... (Akhri Qaybtii hore)
FG. Jawaabaha, aragti iyo tixraaca taariikho ka duugan Soomaalida oo ku haboon in tixraacooda loo soo bandhigo Soomaalida waxaad toos ugu qori kartaa HALKAN GUJI (fadlan ku qor bogga soo baxa dhankiisa hoose)
Faafin: SomaliTalk.com | August 5, 2010